Newsenepal:: सोसियल इन्जिनियरिङ
- सोसियल इन्जिनियरिङ
एक पटक फर्क्यौ माओवादी बिद्रोह तर्फ । करिब ८-९ बर्ष अगाडी निर्मलमणी अधिकारीद्वारा सम्पादित युगपत्र साप्ताहिकमा 'नेपाल गेम प्लान' बारे प्रकाशित समाचार पढेको थिए । भारतीय गुप्तचर संस्था 'र'ले नेपाललाई बिखन्डन गर्न पब्लिक रिलेसन कम्पनी संचालक मार्फत अध्ययन गराएको रहेछ । जसको अध्ययन अनुसार राजतन्त्रको बहिर्गमनपछी मात्र बिखन्डन सहज हुने निष्कर्ष निकालिएको रहेछ् । मनाङ-मुस्ताङमा हेलिकप्टरबाट हतियार खसाल्दा पनि सफल हुन नसकेको खम्पा बिद्रोहको स्वरुप बदलेर चीन टुक्राउने पश्चिमी स्वार्थ र सके सिक्किम नसके भुटान सम्म बनाउने 'र' को चाल नेपालको तत्कालिन राजतन्त्रमा आएर रोकिने भएपछी राजतन्त्रको उन्मुलन अपरिहार्य देखियो । तर कसरी ?
राजदरबार हत्याकाण्डलाई नै हेरौ न । प्रश्नै प्रश्नले घेरिएको छ । संसार भरी सनसनी मच्चाउने दरबार हत्याकाण्ड बारे अन्तराष्ट्रिय शक्ति भनौदा युरोपेली- अमेरिकी देशहरू चुपचाप । क्षेत्रिय शक्ति भारत ' ल भैगो दैबको लेखा' भन्ने झै अभिब्यक्ति दिनुले प्रष्ट पर्दैन र हत्याकाण्ड हुनुमा कसलाई फाइदा छ ? झन्डै एक लाख सेना र तीन करोड जनताको लोकप्रियता बोकेको राजतन्त्र जसको झुकाव चीनतर्फ हुनुले तिब्बत टुक्राएर चीनलाई कमजोर बनाई क्षेत्रिय शक्तिको रूपमा उदाउन चाहने भारतको टाउको दुखाई त हुने नै भयो । धार्मिक निरपेक्षताको गलत परिभाषा जबरजस्ती लाद्न चाहने पश्चिमी देशहरूलाई बिश्वको एक मात्र हिन्दू राजा, त्यो पनि चीनतिर झुकाव राख्ने - घाँडो त हुने नै भयो । तर बिरेन्द्रको लोकप्रियताको अगाडी न माओवादी जनयुद्धले राजतन्त्र ढाल्न सक्थ्यो न कुनै दलिय आन्दोलनले । त्यसको समाधान स्वरुप भएको हो हत्याकाण्ड ।
आफैले तालिम दिएको माओवादीले पहिलो संबिधानसभामा अप्रत्यासित मत पाएपछि भारतीय र अमेरिकीको सात्तो गएको थियो । भारतले खुल्लम खुल्ला माओवादीलाई 'साइज'मा राख्नुपर्ने लबिङ गरेको प्रष्ट छ । माओवादी बिद्रोहलाई चरम उत्कर्षमा पुर्‍याउनुको उद्देश्य नेपालको राजनीतिक ब्यवस्था परिवर्तन गर्नु थिएन, बरु चीनको भरपर्दो मित्र राजतन्त्रको उन्मुलन गरेर अस्थिरता कायम गर्नु हो ।
- रणनितिक महत्व:
अमेरिका सहितको पश्चिमा शक्तिले नेपालको अस्थिरताको फाइदा उठाएर तिब्बत टुक्राउने 'लालिपप' भारतलाई देखाइरहेको छ । तर भारतियलाई यो हेक्का छ की छैन पश्चिम शक्तिले नेपाललाई तिब्बत टुक्राउन मात्र होइन भारत टुक्राउन पनि प्रयोग गर्नेवाला छ । तिब्बती शरणार्थीको बिषयमा बिधाबारिधी गर्नु भएका डा अच्युत अर्यालको अध्ययनको निष्कर्ष छ ' चीनमा बिद्रोहको बिउ रोपीसकियो । अब मलजल मात्र गरे पनि तिब्बत टुक्रिने दिशामा अघि बढिसक्छ । तर पश्चिमी शक्तिको ध्यान अब भारततिर ढल्किएको छ । नेपाल नै आधार बनाएर भारत टुक्राउने योजना पनि अघि बढ्दै छ । ' एकातिर नेपाललाई आधार बनाएर पश्चिमी राष्ट्र र भारत मिलेर तिब्बत टुक्राउने षड्यन्त्र गरिरहेको छ भने अर्को तिर परिआएको खण्डमा भारतलाई २०-३० टुक्रा बनाउन के गर्नुपर्छ भनेर चिनियाँ थिन्क ट्यान्कले सन २००९ मै अध्ययन गरिसकेको छ । तीन शक्तिको रणनितिक केन्द्र बनेको छ नेपाल ।
- अरब स्प्रिङ की सुरक्षा चुनौती :
एक पटक बिचार गरौ; पश्चिमी देशहरूको नीम्ति फरक् राजनितिक ब्यवस्था बढी घातक हुन्छ की फरक् धार्मिक आस्था ? राजनितिक ब्यवस्था त एक रात मै परिवर्तन हुन सक्छ तर धार्मिक आस्था पुस्तौ पुस्ता सम्म रहन्छ । यसर्थ पश्चिमी देशहरूको नीम्ति फरक राजनितिक ब्यवस्था भन्दा फरक धार्मिक आस्था भएका देशहरूबाट बढी सुरक्षा खतरा महसुस हुनु स्वाभाबिक हो ।
अब्राहमिक दर्शनमा आधारित ईस्लाम, इसाई र यहुदीहरू बीचको माराकाट आज देखिको होईन । हिटलरको पाला देखि भर्खरै बेल्जियमको यहुदी सग्राहलयमा भएको हत्याकाण्ड यहुदीको अस्तित्व नसिकार्नेबाट प्रेरित छ भने 'कट्टरपन्थी मुसलमान' बिरुद्धको नाममा लगभग सबै ईस्लामिक देशहरू ध्वस्त छन् । जो बलियो हुन्छ, अर्कोलाई सिध्याउने सिलसिला रोकिएको छैन् । भन्न त बेला बेलामा अमेरिकी राष्ट्रपतीहरू ईस्लामिक देशमा आक्रमण गरे लगत्तै यो ईस्लाम बिरुद्धको लडाई होईन, आतंकबादी बिरुद्धको लडाई हो भन्छन् तर मर्छन त मुसलमान नै । अरबमा चलेको आन्दोलनको आँधीबेहरीले सिरिया, लिबिया र इजिप्टले नराम्रोसँग गालेको छ । ईस्लाम धर्ममा बिश्वास गर्ने, सम्रिद्धी तिर लम्किदै गरेको सिरियामा बिद्रोहीहरू बसार अल असादको सरकारलाई चाडै नै ढाल्ने समाचार आउथे एकताका । रसायनिक हतियारको भण्डार पश्चिमी देशलाई सुम्पे लगतै बिद्रोह लगभग सेलायो । डेढ लाख मानिस मारिए । देश ध्वस्त भयो । ईस्लाम धर्ममा विश्वाश गर्ने सम्पन्न देश लिबियामा बिद्रोहको घोषणा भए लगतै बिद्रोहीहरू एके ४७ र मोर्टर लिएर उत्रिए । फ्रान्सले हवाई आक्रमण गर्‍यो । गद्दाफी मारिए । देश ध्वस्त भयो । अब अहिले बिभाजनको सङघारमा छ । अझै कति मारिने हून, कुनै निश्चित छैन । इजिप्टमा बिद्रोह भयो, होस्नी मुबारक बिरुद्ध । उनी पद्च्युत भए । चुनावमा 'मुस्लिम ब्रदरहुड' जित्यो । पश्चिमीहरूको सात्तो गयो । सैनिक कु भयो । अहिले बिजयी पार्टी प्रतिबन्धित छ ।
अरबमा प्रजातन्त्रको लहर (अरब स्प्रिङ)लाई समय मै बुझ्न भ्याएको एउटा देश हो- रसिया । अरब स्प्रिङ स्वतस्फुर्त भएको होईन यस पछाडी ठुलै सोसियल ईन्जिनियरिङ रहेको ठहर गर्दै आफ्नो देशमा संचालित एनजीओ आइएनजीओ माथि कडा निगरानी सुरु गरेको थियो । एक पटक बिचार गरौ त - इराकमा जैबिक हतियार थियो भनियो - ध्वस्त गरियो । सिरियामा रसायनिक हतियार थियो । बिद्रोह चर्काइयो । रसायनिक हतियार नष्ट गर्ने सम्झौता भयो । बिद्रोह सेलायो । ईरानमा आणबिक हतियार छ भनियो । न आक्रमण गर्न सकियो न बिद्रोह गराउन सकियो । तत्काललाई नाकाबन्दी लगाइयो । यहुदी राज्य इजरायलको अस्तित्व नस्विकार्ने र अमेरिकी आदेश पालना नगर्ने सबै जसो ईस्लामिक देशहरू ध्वस्त हुनुमा फाईदा कसलाई छ ? यो बुझ्न गाह्रो होला र ? फरक् धार्मिक आस्था र राजनितिक बिचार राख्ने देशहरू, पश्चिमी देशहरूको नीम्ति सुरक्षा चुनौती हून । ती देशहरू सम्पन्न हुँदै गएमा भोलि आफै माथि आक्रमण गर्ने भयको कारण आजै ध्वस्त पारिएका हून । त्यसमा झन् आर्थिक स्वार्थ त छदैछ ।
नेपालमा सम्भाब्य रक्तपात:
सिके लालले नेपालीहरूको साझा दुश्मन नभएको कारण यसको राष्ट्रियता सकिएको गुनासो गर्नुभएको थियो सेतोपाटीको एक लेख मार्फत । हामीले पहिचान नगरेको मात्र हो, आम नेपालीको साझा दुस्मन टोल टोलमा इसाई धर्मको मार्केटिङ गरिरहेका डलरबादीहरू हून । पुर्बिय दर्शनमा आधारित नेपाली समाजको एकता टुटिसकेको छैन् । उत्तरी भेगका लामाहरू प्रार्थना गर्न दक्षिण लुम्बिनी पुग्नैपर्छ । पश्चिमका थारु र पूर्वका मधेशी पशुपतिनाथ दर्शन् गर्न काठमाडौं आउनै पर्छ । नेवारको रातो मच्छेन्द्रनाथको जात्रा भर्न बाहुन छेत्री पुगेकै हुन्छन् । असी प्रतिशत बढी हिन्दू भएको नेपालीहरू छाती पिटेर बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हून भन्छौ । पुर्बिय दर्शनमा आधारित हाम्रो समाजको धार्मिक सहिष्णुता यो स्तरमा छ । फ्रान्स र बेल्जियमले मलजल गरेका रुवाण्डाका हुतु र तुत्सी झै यहाँ एक जातले अर्को जात बिरुद्ध हतियार उठाउने सम्भावना छैन । त्यसकारण पश्चिमी शक्ति कुनै एक पक्षलाई हतियार भिडाउन ईसाई धर्मको अत्याधिक मार्केटिङमा लागेका छन् ।
आज अनाथको नाममा ल्याइएका अबोधको दिमागमा इसाई धर्मको बिचार लाद्ने दिलसोभा जस्ता आमाहरू जन्मिएका छन् । भोलि ती अबोधहरू माथि अन्याय परेको भन्दै त्यस बिरुद्धमा लड्न हतियार बोकाउने बाबाहरू जन्मिनेछन । ठाउँ ठाउँमा पत्याउन नसकिने गरी बढेको धर्म परिवर्तनले अबको दश बर्षपछी कस्तो अवस्था निम्त्याउला ? आज नगन्य संख्यामा छन् र त चुपचाप छन् । यहि मार्केटिङ शैलिमा धर्म परिवर्तन् गराउदै लगेमा अबको दश बर्षपछी कस्तो अवस्था आउला ? तिहारको लक्ष्मी पूजामा पुज्नको नीम्ति गाई खोज्दै हिड्ने समूह र तिहारको बिदा मनाउन बिहानै गाई काटेर मासु भाग लगाउदै गरेका समूह जम्काभेट हुँदा कस्तो अवस्था आउला ? बस, पश्चिमी शक्ति यहि अवस्था कुर्दैछन । हिन्दूको बाहुल्यता रहेको देशमा इसाईको मानव अधिकार रक्षा गर्ने निहुमा नेपाली आकासमा बम बर्षक बिमान उडाउन र बिदेशी सेनाको घुसाउनु यो मार्केटरहरूको उद्देश्य हो ।
तर अन्तिम् उद्देश्य नेपाल चै होईन, भारत र चीन हो । चीन स्वत: टुक्रिनेमा पश्चिमी शक्ति ढुक्क छ । तर एक अर्ब हिन्दूलाई एक्त्रित राखेको बिशाल भारत पश्चिमी देशको नीम्ति कुनै पनि बेला सुरक्षा चुनौती हुन सक्ने कुरा पश्चिमी राष्ट्रहरूलाई थाहा भैसक्यो । गरिबी, भोकमरी र आन्तरिक कलह हुँदै त आफ्नो कुटनितिज्ञ देवयानी माथि गरेको अमेरिकी ब्यवहारको ठाडै बदला लिने भारत, बिकसित भैसकेपछी के गर्ला भन्ने चिन्ता उनीहरूलाई परिसकेको छ । त्यसकारण बिभिन्नता सहितको भारत टुक्राएर कमजोर बनाउन सबभन्दा पायक पर्ने स्थान नेपाल भएकोले आज सम्म जे जे षड्यन्त्र भएका छन्, ती सबका दिर्घकालिन लक्ष्य छन् । भारतलाई यो ज्ञान नभएको होईन । तर उसको बुझाईमा नेपाल अस्थिर रहे यहाँको निर्णय क्षमता आफूमा आउने र सम्पुर्ण देश आफ्नै नियन्त्रणमा आउने भ्रम पालेको छ । त्यसै कारण अस्थिरता जारी रहे पनि इसाई धर्म भने रोक्नुपर्ने आवाज उठाउछन भारतीय नेताहरू ।
कतिपय पाठकहरूलाई लाग्ला एक्काईसौ शताब्दीमा बिकसित देशहरू धर्मको आधारमा षड्यन्त्र गर्दैनन । हुन पनि हो । तर बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामेरुनले बेलायत क्रिश्चियन देश भएको कुरामा बिश्वस्त रहन संचार माध्यम मै भन्छन् । अरु देशलाई धार्मिक निरपेक्षताको नीम्ति प्रायोजन गर्ने देशको प्रधानमन्त्रीले त्यसो भन्नुको अर्थ के हो ? भगवान यशुको जन्मभुमी इजरायलको राजधानी जेरुसेलम हो भनेर् हामी पढ्थ्यौ, स्विकार्थ्यौ तर युरोपेली देशहरू यशु जेरुसेलममा जन्मेका हून तर त्यो इजरायलको राजधानी हो भनेर् स्विकार्दैनन । आफ्नो भगवानलाई सुली चढाउने यहुदीको देशको राजधानी जेरुसेलम भनेर् कसरी स्वीकार्नु ? पुर्बिय दर्शन निकट रेड इन्डियनलाई सखाप पारेर निर्मित ८० प्रतिशत इसाई रहेको अमेरिकालाई ' नेसन अन्डर वन गड' भन्नुको आशय के हो ? धार्मिक युद्ध सकीसकेको छैन । सिधै आक्रमण गर्नुभन्दा 'फुटाउ र मर्न देउ' को रणनितीमा छ ।
राजदरबार हत्याकाण्ड न कुनै संकी युवराजले गराएका हून न तपाई हामीले शँका गर्ने "उही ब्यक्ति" ले मात्र गराएका हून । पुरै पश्चिमी शक्ति दिर्घकालिन अभिष्ट लिएर सँलग्न छ । यसक्रममा सत्ता कब्जा गर्ने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र त मोहोरा मात्र बनेका हून । यो पुरै 'ग्राण्ड डिजाइन' बुझ्ने स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला एक मात्र होईन । समय मै भारत, चीन र नेपाल बीच स्थायित्वको नीम्ति सम्झौता नहुने हो र नेपालमा चलिरहेका इसाई धर्मका मार्केटरलाई नरोक्ने हो भने हामी नेपालीले कहिल्यै नदेखेको रक्तपातको स्थिति आउँदैछ, हेर्दै जाऔ ।
( लेखको आशय इसाई धर्म रोक्नु होईन । डलरबादी र रक्तपातको नीम्ति गरिएको मार्केटिङ रोक्नु हो )
1695 1 3/22/2016 @ 22:09
Anil Thapaliya जी लेख्नुहुन्छ : एकदम रोचकलाग्दो, समसामयिक र सम्भावित दुर्घटनाहरुको बारेमा लेखिएको लेख सारै राम्रो लाग्यो | हामी सबै यस बिषयमा सचेत हुन अत्यन्त जरुरी छ | धेरै धन्यबाद छ सुशील दाइ यो लेखको लागि |